२१ जना केन्द्रिय समिति सदस्यहरुले बैठक बोलाउन आग्रह गर्नुलाई स्वागत,अब टुप्पीमात्रै होईन, शरिरपनि एक : बरिष्ठ नेता खनाल
न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७५ मङ्सिर १३ बिहिबार |
काठमाडौं, १३ मंसिर । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का बरिष्ठ नेता एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले हिजो बसेको सचिवालय बैठकले गरेको प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता दिने निर्णयले नेकपा अब टुप्पीमात्रै एक नभएर शरिर पनि एक भएको स्पष्ट पारेका छन् ।
बिहीबार विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता खनालले यस्तो बताएका हुन् । प्रदेश कमिटीले पूर्णता पाएकोमा उनले खुशी व्यक्त गरे । यद्धपी उनले नेकपालाई गुटरहित ढंगले एकताबद्ध बनाएर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकत्ता रहेको सुनाए ।
व्यक्तिगत स्वार्थमा पार्टी केन्द्रित भयो भन्ने आरोपमा सच्चाईमा आधारित रहेको उनले स्पष्ट पारे । उनले भने,”कतिपय नेताहरुप्रति कार्यकर्ताको गम्भिर र गहिरो आलोचना छ । तर, केही नेताहरुप्रति आशापनि छ । हामी गलत हुन दिन्नौं । पार्टीलाई एकतावद्ध र अनुशासित बनाएर लैजान्छौं ।”
२१ जना केन्द्रिय समिति सदस्यहरुले बैठक बोलाउन आग्रह गर्नुलाई आफूले स्वागत गरेको खनालले बताए । सचिवालय बैठकमा महत्वपूर्ण कुराहरु टुँगो लगाउने उनको विश्वास छ । पार्टीको नीति, सिद्धान्तसहित नै केन्द्रिय कमिटीको बैठक राख्नेपनि उनले जनाए ।
प्रधानमन्त्री र ओलीबीच आफ्नो कुरा मिलेको उनले सुनाए । आफू गुट, उपगुट र निरंकुशताको विरुद्धमा लड्दै आएको मान्छे भएकोले अहिले नेकपाको एकताको निम्ति लडिरहेको पनि खनालले सुनाए ।
ओली सरकारको एक वर्ष ‘कुरामा नम्बर वान, काममा जिरो’ : सह–महामन्त्री डा. महत
म प्रधानमन्त्रीलाई पास मार्क दिन सक्दिन !
नेकपाका नेतालाई राजपाका नेताले स्टुडियो मै दिए यस्तो चुनौती ! (भिडियो सहित)
सरकारको एक वर्ष पुरै असफल भन्दा नेकपाका नेताले खण्डन गर्न सकेनन् (भिडियो सहित)
नेकपामा तरंग: एउटै पार्टीको दुई अध्यक्ष हुनु जटिल !
लक्ष्मणलाल कर्णको घोषणा : सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियौँ
भेनेजुएला प्रकरणमा सरकारले गल्ती गरिरहेको छ : डा.रामशरण महत
ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि सरकारको निर्णयसमेत किनबेच भएको छ : मैनाली
सबै काम सरकारले मात्रै गर्न सक्छ भन्ने हुँदैन, रंगशाला निर्माणमा राजनीतिकरण र भ्रष्टाचार हुन दिन्न
क्यानको निलम्बन फुकुवा हुँदैछ, अब खेलाडीले सबै पारिश्रमिक पाउँछन् : मन्त्री विश्वकर्मा
मुलुकमा गणतन्त्र समाप्त हुने र सैनिक शासन लागु हुने सिंहको दाबी (भिडियो सहित)